Ururada bulshada Liibiya oo ku eedeyay UNHCR dhimashada qaxootiga Soomaaliyeed | SMC
Home WARARKA MAANTA Ururada bulshada Liibiya oo ku eedeyay UNHCR dhimashada qaxootiga Soomaaliyeed
32 ka mid ah Ururada bulshada ee Liibiya ayaa cambaareeyay waxqabadka liita ee Hay’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay (UNHCR) kadib dhimashadii qaxooti Soomaaliyeed oo ku sugnaa Tripoli oo ay diwaangalisay UNHCR.
Ururada ayaa ku sheegay bayaan ay si wada jir ah u soo saareen in Shucayb Ibrahim oo 19 sano jir ah uu u dhintay xadgudubyada ay geystaan ​​kooxaha ka ganacsada dadka ee magaalada Bani Walid iyo dayaca UNHCR ee Tripoli.
Wakaaladda Qaxootiga Qaramada Midoobay ee Liibiya ayaa soo warisay 7-dii Janaayo in Shucayb uu dhintay waxyar ka dib markii uu ka soo baxay cisbitaalka dhammaadkii bishii Diseembar.
Waxa ay sidoo kale sheegeen in guryaha ay iska dhintaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Liibiya xilli ay u diwaangashan yihiin UNHCR.
Shucayb waxaa lagu afduubay oo si xun loola dhaqmay magaalada Bani Walid ka hor inta aan la siidayn wuxuuna u wareegay Tripoli.
Geeridiisa ka dib, UNHCR waxay sheegatay “waxaan la socodsiinay masuuliyiinta Liibiya dhacdada waxaanan ka caawinay wareejinta meydkiisa.”
Laakiin Ururada Liibiya ayaa beeniyay warbixinta UNHCR, iyagoo sheegay in hay’adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay aysan soo faragelin oo ay meydka Shucayb uga tagtay guri aan kala sooc lahayn dhowr saacadood ilaa faragelinta safaaradda Soomaaliya ee Tripoli goor dambe oo habeen ah.
Previous articleDagaal laga cabsi qabo in uu ka bilowdo Xuduuda Suudaan & Itoobiya
Next articleCiidanka Gorgor oo wada howlgal lagu baadi goobayo dad dil geystay